Maxaa ka qaldan madaxda dalka Soomaaliya? Bal illa daawo |
Dhaqaalaha & SiyaasaddaSiyaasadda & Xalinta Khilafaadka
Agaasimihii Universal ee Bariga Afrika Cabdullahi Xirsi Kulmiye iyo barnaamij soo saaraha dood wadaag Cawil Daahir Salaad ayaa xabsi la dhigay, kadib markii laga kaxeystay xarunta ay ku leeyihiin Muqdisho.
Xarriga agaasimaha iyo saxafigan rug cadaaga ah ayaa ka danbeeyay barnaamij dood wadaag ah oo ka baxay Universal khamiistii, kaasoo ay marti ku ahaayeen Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Xildhibaan Cabdi Xaashi oo si qoto dheer ugu hadlay marxalada dalka iyo in dalku ku jiro gumeysi, Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, Guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada dowladdana ay yihiin kuwo magac u yaal ah oo xilka uun ku magacaaban.
Doodaan ayaa ifineysa waxyaabo badan oo dadka ka daboolnaa, isla markaana aysan jirin dad wadaniyiin ah oo ka dhiidhiya dhibaatada dalka ka taagan.
Xildhibaanadan oo dooda lagu weydiiyay su’aallo ayaa waxay ifiyeen in Soomaaliya looga taliyo xaruntii tababarka ciidamada ee Xalane oo hadda fadhiisin u ah AMISOM iyo diblumaasiyiin lagu sheegay in dalka ay maamulaan.
Soo gudbinta barnaamijkaan dood wadaaga ah ayaa loo aaneynayaa in xariga Wariye Cawil Dahir iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye uu ka danbeeyo.
Ma jirto cid ka tirsan hay’addaha amniga iyo nabadsugida oo ka hadashay xariga labadan wariye.